यस्ताका हातमा विद्याको मन्दिर : जनता माविका प्र.अ. 'रक्सीले मातेर अफिसकै टेबलमा इन्तु-नचिन्तु'
अब हाम्रा बालबच्चाको भविष्य के होला रु जब विद्याको मन्दिर विद्यालयको प्राचार्य नै यस्तो हालतमा हुन्छन् । सर्लाहीको ईश्वरपुर १४ श्रीनगर मा रहेको जनता माध्यामिक विद्यालयका प्र.अ. ले विद्याको मन्दिर विद्यालयकै घोर अपमान गरेका छन् । शिक्षकको वेषका यस्तै व्यक्तिका कारण सरकारी विद्यालय ध्वस्त भइरहेको छ ।